Talooyin ku saabsan helitaanka gaariga ku habboon. Maxaa maskaxda lagu hayaa? | Ragga Stylish
Baabuurkaagu muxuu yahay?
Marka laga hadlayo badalashada gawaarida, waa wax aad u badan muhiim ah in la sameeyo go'aan sax ah oo ku saabsan gaariga ku habboon, midka ku habboon dookhyadayada iyo baahiyahayada. Sidee tahay doorashada saxda ah?
hay noocyo badan oo wadayaal ah, oo had iyo jeer ma sahlana in la dhaho waa kee gaariga ku habboon qof walba, iyadoo lagu saleynayo dhadhan gaar ah, sifooyinka wadista, iwm.
Nooc kasta oo gawaari ah wuxuu la jaan qaadayaa qaabka milkiilaha, iyo darawal.
1 Dhallinyarada iyo wadayaasha khibrad la’aanta ah
2 Loogu talagalay kali iyo lamaanaha
3 Qoysaska dhalinyarada ah
4 Qoysas waaweyn
Dhallinyarada iyo wadayaasha khibrad la’aanta ah
Hadaad hadda waxaad heshay liisankaaga wadista, ikhtiyaarka ku habboon waa gaari yar, oo aan lahayn awood badan.
Dhallinyarada bilaa miisaaniyadda badan waxay doortaan gaari gacan labaad ah Xaaladdan oo kale, waxa muhiim ah in gaadhigu aanu duug ahayn, oo uu isku dhafan yahay iyo nidaamyada amniga ee ku filan xaalad ahaan.
Loogu talagalay kali iyo lamaanaha
Lammaanaha aan carruurta lahayn, iyo sidoo kale wadayaasha keligood ah, waxay doortaan sida baabuur ku habboon midka siiya naqshadda doorbidka. Noocyada noocan ah ee macaamiisha ah waxay rabaan inay ku farxaan moodel ahaan naqshadeynta darteed, sifooyinka kale ee kor ku xusan sida mashiinka, baaxadda gudaha, iwm
Qoysaska dhalinyarada ah
Qoysaska ka soo bilaabay adduunka xiisaha leh ee waalidnimada ayaa doorbida jir wanaagsan, sida caadiga ah gawaarida iswada, ma aha mid aad u weyn.
Markuu cunuggu weli yahay cunug, basaska yaryar. Moodelladani waxay fududeeyaan meelaynta carruurta kuraastooda, adigoon foorarin ama dhibi kan yar aad u badan. Xalka ugu fiican ee waalidiinta iyo ilmaha.
Marka laga hadlayo qoysaska waaweyn, waxa soo socda ayaa lagula talinayaa basaska nooca yar yar ama SUV-yada ah. Haddii carruurtu ka weyn yihiin, laakiin aan hadda loo baahnayn in la qaado kuraasta carruurta ama kuraasta jirridda, saloonayaasha dhexdhexaadka ah ee qoysku waxay noqon karaan xulasho wanaagsan.
Haddii ay dhacdo qoysaska waaweynWaxaa jira noocyo gawaarida yar yar oo qaabkooda ku saleynaya gawaarida ganacsiga, oo leh dhowr kursi.
Ilaha sawirka: Auto10.com / Grupo Montalt
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Baabuurkaagu muxuu yahay?
Zeybra wuxuu kuu soo bandhigayaa dharka cusub ee dabbaasha ee ka yimaada Venice
Baabuurkii ugu horreeyay ee duulaya, mustaqbalka ayaa halkan jooga